Mogadishu Journal » 2019 » June » 8
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre iyo danjiraha cusub ee Midowga Yurub ee Soomaaliya, Nicolás Berlanga Martinez, oo ku kulmay Muqdisho ayaa ka wada hadlay xoojinta xariirka midawga Yurub iyo Soomaaliya iyo dardar gelinta...
Al-Qaeda-linked militants captured a town in Somalia’s semi-autonomous region of Puntland, after taking over a military base. Al-Shabaab fighters seized Af-Urur on Saturday after soldiers moved from the base due to a military tactic, Farah Ali, a military officer said by phone....
Mjournal :-Dagaal-yahano ka tirsan Kooxda Al-Shabaab oo aad u hubeysan ayaa la wareegay deegaanka Af-Urur ee Gobolka Bari, halkaas oo aheyd meel si aad ah looga ilaaliyo magaalada Boosaaso. Sida wararku sheegayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo isaga soo baxay buuraha Galgala ayaa...
Mjournal :-Waxaa Maanta Si rasmi ah loo Furey Xerada Tababarka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo Dowladda Ingiriiska ka hergalisey Magaalada Baydhabo, iyadoona Ciidamo gaareya 100 -Askari oo ka tirsan Qeybta 60-aad loo furey Tababar, Socon doono mudo labo bilood ah. Waxan...
Mjournal :-Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shaqadiisa u fasaxay taliyaha qeybta Booliiska gobolka Nugaal G/sare Cabdixamiid Maxamed Dirir saacado kadib markii uu shaqada ka joojiyay taliyaha ciidamada Booliiska Puntland S/Gaas Muxiyadiin Axmed...
Mjournal :-Sidda ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Ciidanka booliska Askari ka tirsan Ciidamada booliska ee ilaalada ka hayay Koontarool ku yaala nawaaxiga Isgoyska Dabka oo lagu baaro gaadiidka aada dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ayaa toogtay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka...
Mjournal :-Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subag ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay dayactir ku bilaabi doonaan Buundada Magaalada Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa uu sheegay Wasiirka Amniga maamulka Koonfur Galbeed in Boondada ay qarxiyeen...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu kasoo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in uu...
Faah faahin Ololaha Mooshin laga wado Guddoomiye Muudey
Mjournal :-Ololaha Mooshinka laga diyaarinaayo Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa si weyn u xoogeystay , waxaana socda kulamo Madaxtooyadda ay ku leeyihiin xildhibaanada Mooshinka wadda. Gudoomiyaha Muudey ayaa lagu waddaa in uu...
Mjournal :-Garsoore ku sugan maxkamad ku taal magaalada Minneapolis ee gobolka Minisoto ee dalka ayaa xabsi 12 sano iyo bar ah ku xukumay Maxamed Nuur oo ahaa askari ka tirsan booliska Minneapolis. Maxamed Nuur ayaa asal ahaan kasoo jeedda Soomaaliya, waxaana uu ka mid ahaa...